Wararka - waa maxay karaoke？
Waa maxay karaoke？
Magaca karaoke wuxuu ka soo jeedaa ereyada Jabbaan "faaruq" iyo "orchestra". Waxay kuxirantahay macnaha guud, karaoke wuxuu micnaheedu noqon karaa nooc ka mid ah goobta madadaalada, heesaha gadaal gadaal, iyo qalab loogu talagalay soo saarida gadaal gadaal. Macno malahan macnaha guud, waxaan had iyo jeer sawirnaa makarafoon, iftiinka shaashadda ee shaashadda oo leh qeybta hoose, iyo jawiga damaashaadka. Marka, waa maxay karaoke?
Ma jirto jawaab u gaar ah su'aasha ah goorma ayuu markii ugu horreysay soo muuqday karaoke? Haddii aan ka hadalno ku heesaha muusikada oo aan lahayn ereyo, markaa horaantii 1930-meeyadii, waxaa jiray diiwaanno vinyl ah oo leh gadaal gadaal, loogu talagalay waxqabadka guriga. Haddii aan ka hadalno ciyaartooy karaoke ah, waa noocyadeeda markii ugu horreysay loogu talagalay Japan horraantii 1970-yadii iyada oo sixir taabasho ah uu sameeyay muusikiiste Daisuke Inoue, oo adeegsaday gadaal gadaal intii uu ciyaarayay si uu u nasto deg deg ah isagoo ilaalinaya heerka rayrayntii dhagaystayaasha.
Jabaaniyiinta ayaa si aad ah u xiiseynayey heesaha gadaashooda isla markiiba, warshadaha cusub ee soo saarista mashiinnada karaoke ee baararka iyo naadiyada ayaa muuqday. Horraantii 1980-meeyadii, karaoke wuxuu ka tallaabay badda oo wuxuu ku degay USA. Marka hore, waxaa la siiyay garabka qabow, laakiin ka dib markii la alifay ciyaartoy karaoke ah oo guriga ku saleysan, waxay noqotay runtii caan. Maqaalka "Karaoke Evolution" wuxuu ku siin doonaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda karaoke.
Codka heesaha ayaa ku dhex maray makarafoonka meesha wax lagu qaso, halkaas oo uu ku dhex milmay oo uu gadaal ka saaray. Intaa kadib, waxaa si wada jir ah loogu gudbiyay muusigga nidaamka maqalka ee dibadda. Jilayaashu waxay ka akhrinayeen shaashadda TV-ga. Asalka, fiidiyow muusig oo asal ah ama si gaar ah loo soo saaray muuqaallo leh dhexdhexaad dhexdhexaad ah ayaa la ciyaaray.
Muuqaalka Miracast, Microphone Karaoke Wireless ah, Karaoke Microphone la qaadan karo, Hees Cajiib ah Karaoke Player,